U Gaar Dumarka : Haddii Arimahaan Lagaa Helo Odaygaada Waa Ninka Ugu Nasiibka Iyo Farxadda Badan Dunida Ee Ku Dadaal - Hablaha Media Network
U Gaar Dumarka : Haddii Arimahaan Lagaa Helo Odaygaada Waa Ninka Ugu Nasiibka Iyo Farxadda Badan Dunida Ee Ku Dadaal
HMN:- Xiriirkasta oo ka dhexeeya laba isqabta iyo laba isjecel wuxuu u baahan yahay in sida ukuntii oo kale loo dhowro,sida ubixii oo kale loo waraabiyo,islamarkaana laga ilaaliyo inuusan wiiqin.
Isbedelada nolosha iyo cimiladuba bini aadamka wax cusub oo hor leh ayuu ka bartaa.
Hadii aad aaminsan tahay in qof ku jecel uusan isbedel ku imaan karin waad qaldan tahay, waxwalba sidooda ma ahaan karaa oo waxey u baahan yihiin boor ka jafid iyo dib u soo nooleyn.
Waxaa marwalbo la arkaa dad aad isku jeclaa oo hadana iyadoo aan cidna soo kala dhexgelin isku caajisa. weligaa ma isweydiisay maxaa u sabab ah arimahaas oo dhan. hadaba waxaan kuu heynaa talooyin ku anfici doona Marwo.
Noqo mid maqasha oo dhageysata hadaladiisa marka uu kula wadaagayo rabitaankiisa gudaha, waxa uu ka helo, cabsidiisa iyo dhamaan wuxuu xiiseeyo kadib waxaad ogaaneysaa waxa uu aadka uga helo.
U samee cunooyinka uu aadka u jecelyahay,adigoo mararka qaar lama filaan uga dhigayo cunada uu aadka u xiiseeyo.
U dhig meel uu si fudud uga arki karo fariimo yar yar oo aad ugu muujineyso sidaad u jeceshahay hadey ahaan laheyd geeraar yar, buraanbur, hees ama hadalo kookooban, hadii aad sidaasi sameyso maalintaas oo dhan adiga ayuu kugu riyoon doonaa cidkalena lagama yaabo inuu ka fikiro.
Abuuritaanka jewi fiican si gaar ah dareensii inuu yahay shaqsi muhiim ah oo la koolkoolinaayo lana qaado waqti aad u xiiso badan si indhihiisa aaney cid kale u arkin.
Sii fursado aad ku soo wareegtaan magaalada si aad u wada qaadataan hawo macaan,si aad u noqoto qof uu ku faano oo gacanqabsado dadka hortooda ,
Waa inaad lahaatiin baaqyo idin gaar ah aad wadaagtaan oo ay ka buuxaan ereyo soo jiidasho
Noqo qof daacad ah, iskana ilaali iney caado kuu noqoto been,noqo qof ku dhiirata oo aan la gamban runta.
Ragga badankooda aad ayay u jecel yihiin in la amaano,gaaloos.com, xittaa haddii aysan markaas kuu mahadcelin waa hubaal in ereyadii aad ku amaantay ay qalbigiisa ku soo noq noqonayaan farxad iyo yididiilooyina ay siiso.
Ku amaan xitaa howlo yar oo uu ku qabtay dareensii ahmiyada uu xagaaga ka leeyahay